bhimphoto: November 2010
यौन क्षमता बढाउने उपाय खोज्दा-खोज्दै
विवाहका तीन बर्षपछि आफ्नो यौन क्षमतामा कमि आएको शंका गर्दै धरानका सगुन राइ (छदम नामथर) उत्तेजक औषधी खोज्दै विभिन्न क्लिनिक र सडक छाप चिकित्सकहरुकहाँ धाउन थाले ।
पत्नीसग संसर्ग सुरु नगर्दै वीर्य स्खलन भएर सधै आजित भएका उनले क्लिनिक पुगेर सोध्ने गरेका थिए 'सेक्सको समयलाई कम्तिमा एक घण्टा कायम राख्ने औषधी छ ? यौन क्षमता बढाउन अरु उपाय के के छन् ?' औषधी बिक्रेताले आधा दर्जन ब्राण्डका औषधी देखाएर यौन दुर्बलता कम गर्ने नाममा जे उपलब्ध छ त्यही दिएर उनलाई पठाए । क्लिनिकबाट ल्याएको औषधीले उनको समस्या समाधान भएन । झन् चिन्ता थपियो ।
पत्नीबाट उनले नपुंसकको संज्ञा पाउन मात्र बाँकी थियो । यौन सन्तुष्टी आफुले दिन नसके जीवनसंगिनीको परायासँग सम्बन्ध बढला भन्ने पीरले मनमा घर गर्‍यो । धेरै दिन भौतारिए । अन्ततः केही सातापछि एक दिन धरानकै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मानसिक रोग विभागमा पुगे । त्यहाँ परामर्श लिएपछि भने उपचार भयो । उनी मानसिक रुपमा शीघ्र पतनको शिकार भएका थिए ।
परामर्श र साधारण औषधिकै भरमा चिन्तामुक्त भएपछि उनी भन्छन् 'भन्न नहुने । नभनी पनि नहुने यस्ता समस्या धेरैका होलान् ।' उनले भनेजस्तै छ समाज । यौनका कुरा गर्न धक मान्छ । समस्याबाट आजित भएपछि बाहिर नआउने भन्ने कुरा त छैन आखिर । क्लिनिक, नर्सिङ होम र अस्पताललगायतका सबैजसो उपचार केन्द्रमा यौन विशेषज्ञ सजिलै उपलब्ध छैनन् । सडकमा पसल थापेर यौन शक्तिवर्धक ओखती पाइन्छ भनी माइक लगाउनेका वरपर झुम्मिने भीडमा सगुनजस्ता धेरैले समस्याको निदान पाउने आश गरिरहेका भेटिन्छन् । सडकमा बसेका झोले क्वाकले दिएका ओखती र सल्लाहको भरमा धेरै दम्पति यौन दुर्वलताको उपचार गर्नबाट बन्चित भएका छन् । कतिपय त भारतको जोगबनी, सिलिगुढीसम्म पनि जाने गरेका छन । लुकीलुकी हेरिने नीलो चलचित्रमा देखाइएजस्तो क्रिडाको क्षमता किन नभएको होला भन्दै मनमा कुण्ठा पाल्नेहरु विस्तारै मनोविमर्शकर्तातर्फ परामर्शमा अग्रसर भएका छन् ।
प्रतिष्ठानको मानसिक रोग विभागमा सगुनको भन्दा अलिक फरक घटना लिएर एक दम्पती आए । उमेरले भर्खरै ३० नाघेका उनीहरुको समस्या थियो- पत्नीको यौन चाहना एकाएक घट्यो । विवाह गरेको एक दसक बित्यो । दम्पतीमध्ये एक जनामा यौन इच्छा हराउन थालेपछि अर्कालाई चिन्ता लाग्नु स्वभाविक थियो । पत्नीको चाहनामा कमि मात्र आएन, पतिलाई अस्व्भाविक लाग्ने सल्लाहसमेत दिन थालिन् । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मानसिक रोग विभाग प्रमुख प्राडा प्रमोद स्याङवाकहाँ आएका उनीहरुले समस्या सुनाए । संसर्गका बेला पत्नी भन्थिन् 'मलाई चाहना छँदैछैन, दुख्छ । बरु, पैसा दिन्छु बाहिर कतै गएर त्रि्रो यस्तो इच्छा पुरा गर ।' यस्तो सल्लाह दिने गरी पत्नीमा शारीरिक र मानसिक रुपमा केही न केही गडबडी छ भन्ने लागेर उनीहरु मानसिक रोग विभागमा सुटुक्क समाधानको उपाय खोज्दै आएका थिए ।
'उनीहरुको पारिवारिक-समाजिक परिवेश अध्ययन गरियो, अनि जाँच गर्न लगाइयो, डा. स्याङ्वाले भने 'योनीमा इन्फेक्सन थियो । त्यसैले त्यस्तो भएको रहेछ ।' महत्वपूर्ण अंगमा हुने कुनै पनि संक्रमणले मान्छेको प्राकृतिक बानीमा फेरबदल हुनसक्ने उनले बताए । उपचारपछि उनीहरु फिरेका छैनन् । अस्पतालको बुझाइमा उपचार पाएकाले अब उनीहरु पुनः शिकायत लिएर आउने छैनन् ।
खुला उपभोक्तावादी समाज, शहरीया जीवनशैली, चलचित्र, खानपान र रात्री जीवन आदिको प्रभावले युवायुवती र दम्पतीले यौनलाई सुख-आनन्द दिलाउने प्रमुख शक्तिका रुपमा मानिरहेको अवस्था छ । तर, विभिन्न कारणले धेरैलाई सुखद अनुभव नभएका अवस्था पनि छन् । जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, परिवारिक, धार्मिक, परम्परा र संस्कृतिलगायत जेसुकै मुल कारक हुन्, पीडितहरु भन्न नचाहेरै पनि शक्तिवर्धक अवस्थाको खोजी गरिरहेको डा. स्याङबा बताउछन् । भन्छन्, 'यौन क्षमता कति हो भन्ने नै थाहा नपाएका कारण धेरै दम्पतीहरु अनावश्यक मानसिक तनावमा पनि पर्ने गरेका छन् । यस्ता दम्पतीहरु धेरै छन् समाजमा ।'
उनको बुझाइमा यौनउत्तेजना बढाउने औषधी, विधि र प्रक्रियाको खोजी आधुनिक समयमा मात्र भएको होइन । मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै यस्ता खोजी हुदै आएका छन् । पछिल्लो समय जीवनलाई आनन्द र सुख अनुभव गराउने मुख्य कार्य मान्न थालिएपछि बढी बैज्ञानिक अध्ययन-अनुसन्धान भएका छन् । उनका अनुसार यौनलाई विज्ञानले पनि आधारभूत शारीरिक आवश्यकतामा राखेपछि सन्तुष्टी पाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर झन धेरै उपायका खोजी पनि भएका छन् ।
यौन क्रिया मानिस त के कुनै पनि जीव जन्तु, पशु पंक्षिको अस्तित्व नै नहुने यथार्थ एकातर्फ छदैछ । अर्कातिर सन्तान उत्पादनका लागि मात्र भन्दा पनि चरम आनन्द लिने बानी परेकाहरु धेरैलाई दुर्बलताको कमजोरीमा परामर्श र उपचार सेवा लिइरहेको भेटन सकिन्छ । जुन जीवमा यौन दुर्बलताको असर पर्छ त्यसको वंश वा प्रजाति कुनै पनि बेला समाप्त हुने विषयमा बैज्ञानिकहरु पनि सहमत छन् । प्राणीमा यौन क्षमता प्रकृतिले नै दिएको हो ।
यौन क्रियालाई सरल रुपले बुझने हो भने यो जटिल मानवीय व्यवहार भएको मनोविमर्शकर्ताहरुको भनाइ छ । यौनलाई सहज, आनन्ददायक, सुखदायक र दम्पतीको लागि सर्वस्वीकार्य बनाउन मानवीय शरीरको स्नायु प्रणालीदेखि समाज, धर्मसंस्कृति, रीति, खानपान, रहनसहन, समय र सान्दर्भिकताबीच सामान्जस्यता हुनुपर्ने उनीहरु बताउछन् ।
प्रकृतिले मानिसलाई यौन क्षमताले भरिपूर्ण बनाएपनि विभिन्न जैविक, सामाजिक, पारिवारीक, धार्मिक कारणले दुर्वल बनाउने गरेको छ । यौन दुर्वलताका कारणहरु बारे डा. स्याङबा भन्छन्, 'यौन दुर्बलता निम्ताउने प्रमुख कारणमा स्नायु प्रणालीको अहंम भूमिका हुन्छ । जसरी हाम्रो ब्रेनमा भोक प्यास, न्रि्रा थाहा पाउने स्नायु केन्द्रहरु हुन्छन्, त्यस्तै यौन चाहना कायम राख्ने हाइपोथेलामस स्नायु प्रणाली हुन्छ ।' हाइपोथेलामस स्नायु प्रणालीमा कुनै कारणले क्षति पुगेमा यौन दुर्बलता देखिने उनी स्पष्ट पार्छन् । त्यस्तै शरीरको स्नायु प्रणालीमा विपरित लिङ्गीप्रति आकर्षित हुने केन्द्र पनि हुन्छन् । ती केन्द्रमा पनि क्षति पुगेमा पनि यौनाकर्षणमा कमि हुने उनले बताए ।
मेरुदण्डको पेरीफेरल सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा कुनै प्रकारको आघात परेर क्षति पुगेमा पनि यौन क्षमतामा कमि आउछ । यी बाहेक अरु पनि कारणहरु हुनसक्छन् । यौनका बारेमा खुला समाज र बन्द समाजको प्रभावले पनि यौन क्षमतामा असर पर्ने गरेको छ । मनोवैज्ञानिक अध्ययनअनुसार खुला समाजमा यौनलाई सामान्य र सकारात्मक प्रक्रियाका रुपमा लिने गरिएकाले स्वतन्त्रता बढी छ । यसले यौन चाहना र क्षमतामा वृद्धि हुन्छ भने बन्द समाजमा पाप, घृणित काम, व्यभिचारीको रुपमा लिइने भएकोले यौन आनन्द लिएपछि पनि कतिपय अवस्थामा आत्मग्लानी भएको महसुस गर्दै मानिसहरु बाच्न बाध्य छन् ।
डा. स्याङबा भन्छन् 'घर पारिवार र समाजको वातावरण अति धार्मिक परिवेशको भएमा पनि व्यक्तिको यौन क्षमतामा कमि आउन सक्छ । धार्मिक प्रवृत्तिका मान्छेले यौनलाई सामान्यतया सन्तान उत्पादनका माध्यमको रुपमा मात्र हेर्छन् । आनन्दका लागि होइन भन्ने संकुचित दृष्टिकोणका प्रभावले कतिपय अवस्थामा यौन क्षमता घट्न सक्छ ।' यस्तै, महिला र पुरुषमा कुनै प्रकारको मानसिक आघात परेको बेला पनि यौन चाहना वा क्षमतामा कमि आउने गरेको उनी बताउछन् । संसर्गका लागि परिपक्व हुनअघि नै बलात्कृत भएमा वा यौन दुर्व्यवहार खेपेका महिलामा पनि यौन चाहना कम हुने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको प्रसङ्ग कोट्यादै डा. स्याङबाले बताए 'त्यस्ता महिलाले जिन्दगी भरि पुरुषलाई विश्वास नै गर्दैनन् । कतिपयमा यौनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पुरै नकारात्मक भएको हुन्छ ।'
शारीरिक-मानसिक तनाव भएको बेला पनि व्यक्तिमा यौन दुर्बलता उत्पन्न हुन्छ । नवविवाहित वा पहिलोपटक यौन सम्पर्क गर्दा विभिन्न डर त्रास, हतार आदिको कारण चाडै वीर्य स्खलन हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । तर, यही घटनालाई लिएर कुनै पुरुषले आफ्नो शारीरिक कमजोरी मान्न थाल्यो भने त्यसले उसलाई अनावश्यक तनावतिर डोर्‍याउछ । एक दुइपल्ट यौन सम्पक गर्दा शीघ्रपतन भएमा आफुलाई नपुंसक सम्झन थाल्दा यौन साथीले पनि थोरै मात्र प्रतिक्रिया दिनाले त झन समस्या बढाउने गरेको छ । चिकित्सकहरु यस्तो समस्यालाई प्रिमाच्योर इज्याकुलेसन भन्छन् । यौन साथीलाई पनि पुरुषमा हुने कतिपय यस्ता क्रियाहरु बारे थाहा नपाएर साच्चै नै यौन सन्तुष्टि नदिने हो की भन्ने अन्धविश्वासले तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने गर्छन् । जसले थप यौन दुर्वलता मात्र होइन मानसिक तनाव र चिन्ता बढाउन मद्दत गर्ने गरेको मनोचिकित्सकको भनाइ छ ।
यौन क्षमतालाई बढाउन र कायम राख्न जैविक पक्षको मात्र सुधार गरेर हुदैन । सबैभन्दा पहिले त स्वस्थ रुपमा मनोवैज्ञानिक तयारी हुनुपर्छ । जैविक स्वस्थतासगै सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक वातावरण स्वस्थ भएमा स्वतः यौन क्षमता कायम रहने मनोवैज्ञानिकहरुको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
(कान्तिपुर कोसेलीको २०६७ कात्तिक १३ को पूर्वाञ्चल संस्करणबाट साभार । उक्त अंकमा यो सामाग्री 'धेरै सोचेर समस्यामा' शिर्षकमा प्रकाशित भएको थियो)
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 6:29 PM No comments:
उडी जाउँ भने...
चरो बोलाउँदा बोलाउँदै श्याम सरदार (१०) को स्वर भासिएछ । बोल्दा अनौठो सुनिन्छ । तर, चरो बोलाउन मरिहत्ते घटेको होइन । विराटनगर-इटहरी मार्गमा पर्ने बाँसबारी चोकबाट २ किलोमिटर पश्चिम बुढी खोलाछेउ मुढेरीमा मान्छेको आवाजको नक्कल गर्ने चिबे चरो हेर्नेको भीड छ ।
६ कक्षामा पढ्ने श्यामकै सिको गर्छन ३ मा पढ्ने संजीत सरदार । भन्छन् 'यसले मधेसी भाषा बोल्छ । मेजवान हिड् भन्यो भने नै जेबो भन्छ ।' केही हौसिएका उनलाई चरावार्ता मन परेको छ । भन्छन् 'साथी तोरा नाम कि छो भन्यो भने श्याम भन्छ ।' उनलाई अघि लगाएर चराको आवाज सुन्न तम्सिएरका विराटनगर-५ खार्जीका छुतहरु दास (७०) ले मुख विगारे । उनले भने 'धत ! यसले त छाडा पनि बोल्दोरैछ ।'
हाम्रा वरपर देखिने सबैजसो चराका आनीबानी एकअर्का प्रजातिमा फरक छन् । आवाज, बनोट र रुपरंग । अध्यापनमा झण्डै चार दसक बिताएका प्राणीशास्त्रका प्राध्यापक डा. भरतराज सुब्बा (६०) को घर सानो कुनै पुस्तकालयभन्दा कम छैन । उनी चरा चिन्छन् । र, केहीको आवाजको नक्कल पनि गर्न जान्दछन् । जानकारी जुटाउने क्रममा उनले संग्रह गरेका पुस्तकको भीडमा बेला बेला उनी हराएजस्ता देखिन्छन् । कुनै प्रजाति नयाँ लागे उनले फिजाउँने जर्नल, पुस्तक र पत्रिका कोठामा छरपस्ट हुन्छन् । जब पुरा कुरा मिल्छ अनिमात्र ती समेटिन्छन् । पछिल्ला एक दसकदेखि अध्यापनबाट जोगिएको समय उनले चराकै विषयमा अनुसन्धान गर्दै बिताउँदै आएका छन् । 'मान्छेको बानीलाई जति दोष दिएपनि कम हुन्छ, उनले भने 'उसले यी महिना रंगबिरंगी जीवका लागि सोचेको गरेको कमैमात्र देख्न सकिएको छ ।' साना बुट्यान र झाडीमा चरा स्वर सुनेर तिनको आवाजसहितको चित्र कैद गर्न क्याननको सानो क्यामेरा झिक्नअघि बाइनाकुलरले हेर्छन् । अनि बताउँछन् ,त्यसको प्रजाति , आनीबानी र पाउन सकिने स्थान ।
उनका अनुसार मान्छेको आवाजको नक्कल गर्ने प्रशस्त चरा छन् । तिनमा सुगा, मैना र चिबे भेट्न गाह्रो हुन्न । जताततै भेटिने भँगेरोदेखि झाडीझाडी डुल्ने मसिना फिस्टाका आकार र आवाज फरक छन् । भन्छन् 'चरालाई केही डिस्टर्ब गर्नुहुन्न । उसले डिस्टर्ब फील गरेन भनेमात्र हामी उसको आवाज र बानीबेहोरा अध्ययन गर्न सक्छौ ।'
दिनभरि कोसी ब्यारेजमा काट्दा यात्रा थुलुङ पटक्कै पट्यार नमान्नु अनौठो बानी भन्ने लाग्छ । एक दसकअघि थुलुङले सप्तकोसी किनारमा घण्टौं बिताउँदा उनलाई साथ दिइन्थ्यो । अहिले उनी भेट हुदा सुनाउँछन् 'मेरो फलानो चरोको फोटो यति हजारमा बिक्यो । फेरि फलानो ठाउँमा जाउँ है ।' निकोनको एनालग एफएम-१० बाट डी-७०० सम्म आइपुगेका उनी अहिले पनि चरा खिच्ने मापदण्डको क्यामेरा, लेन्स र बलियो ट्राइपोर्ट खोजिरहेका भेटिन्छन् । अनि खिचेका चराको आनीबानी अनि तिनलाइ प्राकृतिक व्यवहारमै कसरी तस्बिरमा उतार्ने भन्ने उनको चिन्ता अनौठो छ ।
राजधानी बाहिरको फोटोपत्रकारितामा प्रतिष्पर्धा न्युन छ । पत्रपत्रिकाले छाप्ने तस्विरमा चरा र वन्यजन्तुले ठाउँ पाउन विशेष कुनै घटना हुनुपर्छ । अनि दैनिक अखबारका लागि काम गर्नेहरुले क्यारिअर चरा खिचेर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । 'त्यसैले मैले पत्रिकामा काम गर्नुको साटो आफै स्वतन्त्र खोज्ने, खिच्ने र बेच्ने बाटो रोजेको हो, यात्राको स्पष्टोक्ती यस्तो छ 'एउटै चरा खिच्न ३/४ घण्टा जान्छ, समाचारका फोटो खिच्ने जिम्मेवारी भाको मान्छेले कसरी म्यानेज गर्ने ?' फरक धारका यात्रासँग कोशीटप्पुदेखि गोसाइकुण्ड, लुम्बिनी,बर्दिया,कैलाली र कञ्चनपुरसम्म थरिथरि चराका सयौ तस्विर संग्रह भएका छन् ।
चराका तस्बिर सजिलो विषय होइन । सिमसारमै विद्यावारिधी गरेर गिद्ध संरक्षणका लागि काम थालेका डा. हेमसागर वरालको अनुभवमा नेपाल चरा पर्यटनको उपयुक्त गन्तव्य हो । भन्छन् 'यो अचम्मको क्षेत्र छ ।' चरा हेर्नैमा लागि आउने पर्यटकलाई नजिकबाट अनुभव गरेका उनको भनाइमा 'चरा हेर्न आउने मान्छे शान्त हुन्छ , उसले आफ्नो उदेश्यमा मात्र ध्यान दिन्छ ।' रैथाने केहीबाहेकका प्रजातिका पंछी र पंछीजन्य क्रियाकलाप सजिलै देख्न पाउनु भाग्य हो । समय लिएर पदयात्रा हिडेकाहरु चरा हेर्न र खिच्न धेरै समय लगाउछन् । चरा पर्यटनका क्षेत्रमा एक दसकभन्दा बढि अनुभव संगालेका डा. वराललाई कोसीटप्पु, लुम्बिनी र चितवन अनि बर्दियामा पाइने चराका प्रजाति, बानी र हुल हेन मिल्ने प्राय क्षेत्र कण्ठ छ । भन्छन् 'सम्भावना धेरै छ ।'
नेपालमा चरा हेर्न उपयुक्त गन्तव्यहरुमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, फुलचोकी डाडा, शिवपुरी निकुञ्ज, कोशीटप्पु, कोशी तटबन्ध, बर्दिया निकुञ्ज, लाङटाङ, गोसाइकुण्ड, अन्नपूर्ण क्षेत्र, थाकखोला, अन्नपूर्ण आधारशिविर, अरुणवरुण उपत्यका आदि क्षेत्र छन् । 'चरा हेर्न आउनले हेरेर मात्र फिर्दैन, डा. वराल भन्छन् 'उसले कहा, कस्तो प्रजातिको वासस्थान कस्तो छ भन्ने जानकारी विश्वलाई दिन्छ ।' उनको अनुभवमा चरा अवलोकनकर्ताले विवरण खोज्न मद्दत पुर्‍याएका हुन्छन् । सप्तकोसी नदिको तटबन्ध आसपासमात्रै पनि उल्लेख्य संख्यामा चरा हेर्न पाइन्छ ।
पंछी संरक्षण संघका अनुसार नेपालमा हालसम्म ८ सय ६४ प्रजातिका चरा भेटिएका सूची छ । यो संख्या विश्वमा पाइने कुल प्रजातिमध्येको ८ प्रतिशत हुन आउछ । हामीकहा पाइनेमध्ये विश्वमै लोपोन्मुख भनिएका ३३ प्रजाति छन् । बिज्ञहरुका अनुसार समुद्र सतहको ७५ मिटरदेखि सगरमाथाजस्तो उचाइ भएकै कारण मौसमी विविधिताले यहा चराका उल्लेख्य प्रजाति पाइएका छन् । कतिपय नया प्रजाति भेटिदा चराविद्हरुले हर्ष मान्दै त्यसको प्रचार गर्छन् । नेपालमा पाइनेमध्ये ६ सय प्रजातिका चराले यहा बच्चा कोरल्न सक्छन् । ६३ प्रकारका फिरन्ते प्रजाति रेकर्ड भएका छन् । फिरन्ते जाडो छल्न नेपालसम्म आइपुग्छन् । र, हिउदपछि फर्कन्छन् । रैथाने धेरै प्रजाति भौगोलिक बनोटसगै फरकफरक ठाउमा भेटिएका छन् । सिमसार रुचाउने चराको उल्लेख्य संख्या हामीकहा भेट्न सकिन्छ ।
वातावरणीय दृष्टिले चराका आफ्नै प्रकारका विशेषताहरु छन् । विज्ञहरुका अनुसार सर्पजस्ता सरिसृपलाई आहार बनाउने चरा जहा छन् , त्यहाको वातावरण संतुलित र मानव बस्न योग्य छ भन्ने मान्नुपर्छ । सर्पले मुसालगायत साना जीव खान्छ । यस्ता जीव हुनका लागि अन्न बाली फल्नुपर्छ । अनि सर्प त्यहा बस्छ जहा उसको आहारा पाइन्छ । मानवबस्ती आसपास बस्न रुचाउने भगेरा, काग, रुपी, गौथली, सानो खैरो गिद्ध, डंगर गिद्ध र गरुडका केही प्रजातिलगायत थोरै चरा यस्ता छन् जसलाई सजिलै देख्न-सुन्न सकिन्छ । तर, अधिकांश पंछी स्वतन्त्रता मन पराउछन् । प्राकृतिक संतुलन रुचाउछन् ।
चरा चित्रकारीतामा तल्लिन इनरुवाको बलाहाका जीवनाथ पोखरेल भन्छन् 'प्रकृतिमा यति विविधता छ कि हामी जे राम्रोसग हेर्‍यो त्यही नौलो प्रकारको पाउछौ ।' ६७ वर्षीय पोखरेलले चित्र बनाउन अघि चराका आनीबानी, वासस्थान हेर्छन् र कलामा रंगमात्र होइन मूर्ति जस्तै बनाएर फ्युजन गर्छन् । 'जोगाउने कुरा जोगाउनु पर्छ भन्ने चेतना ठूलो कुरा हो, उनी भन्छन् 'चराले गर्ने हानी कतै छ भने त्यो उसको वास नाशिएपछिमात्र होला । तर, उसले हाम्रो वातावरण संतुलित राख्न धेरै ठूलो काम गरेको हुन्छ ।'
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 12:09 PM 1 comment: